Gianluigi Donnarumma oo 113 kubadood badbaadiyay! – Gool FM
Gianluigi Donnarumma oo 113 kubadood badbaadiyay!
(Milano) 01 Abriil 2017 – Goolwalaha AC Milan ee Gianluigi Donnarumma ayaa todobaadkan mar kale rikoodh cusub dhigay kaddib markii uu noqday qabtihii ugu da’da yaraa ee abid kusoo bilowda ciyaar uu dheelayo xulka Talyaanigu.
Sida uu werinayo warsidaha La Gazzetta dello Sport, goolwalahan da’da yar ayaa halkiisa kasii wada inuu ka yaabiyo daawatada ciyaaraha isagoo weliba aad u da’ yar oo 18 jir uun ah.
Gigio Donnarumma ayaa noqday goolwalaha ugu bandhigga wanaagsan horyaalka Talyaaniga ee Serie A, isagoo lagasoo bilaabo bishii Agoosto ee danadkii tegey ilaa iminka qabtay 113 kubadood oo uu ka badbaadiyay kooxda Rossoneri.
Laacibkan moowhuubka ah oo loo saadiyo inuu yahay ninka bedeli doona Buffon ayaa waxaa kaalinta 2-aad ugu jira oo ku xiga qabtayaasha Skorupski, Cordaz iyo Gonzo oo min 101 kubadood badbaadiyay.
GOOGOOSKA: Manchester United vs West Brom 0-0
GOOGOOSKA: AS Roma vs Empoli 2-0 (Shaxda sugan)